Himalaya Dainik » जाडोयाममा नुहाउँदा यी ५ कुरामा ध्यान दिन नबिर्सिनुस्
जाडोयाममा नुहाउँदा यी ५ कुरामा ध्यान दिन नबिर्सिनुस्
जाडोमा नुहाउनु सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । जाडोमा पानी नै छुन नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि हुन्छन् । तर, जाडोयाममा लगाईने कपडाले अझै धेरै पसिना निकालेको हुन्छ । त्यसैले दिनहुँ नसकेपनि एक दिन बिराएर नुहाउनु पर्छ ।
नियमित शारी-रिक अभ्यास गर्नेहरुले कपाल ननुहायता पनि शरीर भने सफा पानीले पखाल्नुपर्छ । जाडोमा तातो पानीले नुहाउँदा राम्रो हुने हामीले धेरै सुनेका छौँ । तर हामीले कहिल्यै पनि कपाल तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन ।
यदी तातोपानीले कपाल नुहाउने बानी परेको छ भने आजैबाट त्यो बानी हटाउनुहोस् । तातोपानीले कपाललाई निकै रुखो बनाउँछ। कपाल झर्ने टुक्रिने हुन्छ ।
अनुहार र शरीरको छालाको लागि पनि तातो पानी उपयुक्त मानिँदैन । त्यस्तै धेरै चिसो पानीले पनि छालालाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले, नुहाउनका लागि मनतातो पानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
नुहाउन राखिएको पानीमा केही मात्रामा नुन, तुलसीको पात राखौं । यस किसिमको मिश्रण भएको पानीले नुहाउँदा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ ।
अझ कतिपय मानिसको बानी हुन्छ कपालमा जे भेट्यो त्यसैको प्रयोग गर्ने । तर कपालको लागि उपयोगी हुने स्याम्पु प्रयोग गर्नुपर्छ ।
चिसो कपाललाई झट्कार्ने वा तौलिया बेरीरहनु हुँदैन । तर याद राख्नुहोस् जाडोबाट बच्न भन्दै कपाल हेयर डायरले सुकाईरहने बानी पनि राम्रो होईन । यसो गर्दा कपाल रुखो हुनसक्छ ।
नुहाइसकेपछि शरीरको हरेक अंगमा तौलियाले राम्ररी पुछ्नुपर्दछ । अनि लोसनको प्रयोग गरी मालिस गर्नुपर्छ । मसाजले रक्तसञ्चार पनि बढाउँछ ।
यस्तो क्रिया जाडोको लागि एकदमै उपयोगी कुरा हो । त्यसपछि सफा कपडा लगाएर केहिबेर शरीरको पछाडी भागमा घाम पारेर न्यानो बनाउन सकिन्छ । अनि घाम ताप्दै नङ सफा गरी काट्न सकिन्छ । तर दिउँसोको घाममा धेरैबेर बस्नु हुँदैन ।
हामी आफ्नो शरीरलाई बाहिरबाट स्वच्छ र सफा राख्नको लागि नुहाउनु आवश्यक हुन्छ। तर कुरा आउँछ उचित समयको! कुन बेला नुहाउनु उचित हुन्छ- विहान या बेलुका?
“विहान नुहाउने या बेलुका, यो त व्यक्तिको व्यक्तिगत रुचीमा भर पर्ने कुरा हो।, हार्भर्ड युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिक ‘शेली कार्सन’ भन्छिन्- “तर विहान नुहाउनुको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुन्छ भने बेलुका नुहाउँदा पनि व्यक्तिले दुवै फाइदा र बेफाइदा भोग्नुपर्ने हुन्छ।”
थप पढ्नुहोस् :
विहान नुहाउनु ठीक कि बेलुका ?
“विहान नुहाउने या बेलुका, यो त व्यक्तिको व्यक्तिगत रुचीमा भर पर्ने कुरा हो।”, हार्भर्ड युनिभर्सिटीका मनोवैज्ञानिक ‘शेली कार्सन’ भन्छिन्- “तर विहान नुहाउनुको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुन्छ भने बेलुका नुहाउँदा पनि व्यक्तिले दुवै फाइदा र बेफाइदा भोग्नुपर्ने हुन्छ।”
यदि तपाईँ कुनै रचनात्मक काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा जागिरको लागि अन्तर्वार्तामा जाँदै हुनुहुन्छ भने विहानमा नुहाउनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, डा. शेली भन्छिन्- “नुहाउँदा हाम्रो दिमाग शिथिल स्थितिमा पुग्छ, तर सचेत अवस्थाबाट टाढिँदैन।”
डा. शेलीका अनुसार, नुहाउने बेला हाम्रो दिमागको सोँच र चिन्ता अचेतन मनमा गएर बस्दछ, जहाँ दिमागले स्वतः त्यस सोँचलाई केलाउन थाल्छ, यस्तो अवस्थालाई मनोवैज्ञानिक भाषामा ‘बेटा ब्रेन स्टेट’ (Beta Brain State) भनिन्छ। त्यति नै बेला हाम्रो दिमागको ‘अल्फा स्टेट’ (Alpha State) मा शरीरलाई तनाव र थकानबाट आराम दिने काम गर्छ र क्षय भएका शरीरका कोषहरूलाई निको पार्ने काम गर्छ। जसले गर्दा दिनभरीको बोझलाई दिमागले सजिलैसित ह्याण्डल गर्न सक्दछ। “यहि कारण हो, विहान नुहाएपछि दिनभरी फ्रेस महशुस गरिने!”- शेली भन्छिन्।
रातिको मीठो निन्द्रा
तथापी, यदि तपाईँलाई चाँडै निन्द्रा लाग्दैन र अबेरसम्म पनि आँखा चिम्लिन मान्दैन भने साँझको बेला नुहाउनु सही हुन्छ। यो सबै शरीरको तापक्रमले गर्दा भएको हो। मनतातो पानीले नुहाउँदा शरीरको तापक्रम अलिकति बढ्छ र नुहाएर शरीर सुकिसकेपछि तापक्रम घट्दै जान्छ। “यसरी शरीरको तापक्रम एक्कासी घटेपछि शरीरमा ‘कोर्टिसोल हरमोन’ को मात्रा घट्दै जान्छ र सजिलै निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्दछ।”, डा. शेली भन्छिन्।
“तर, विचार पुर्याउनुपर्छ अधिक गर्मीको बेला”- शेलीले सुझाव दिँदै भन्छिन्। गर्मीको बेला दिनभरी हाम्रो शरीर सामान्यभन्दा अधिक तातेको हुन्छ। यो तापक्रम सजिलै घट्नेवाला पनि हुँदैन। यसरी तातेको शरीरमा साँझको बेला चिसो पानीले भिजायो भने अब त्यहाँ शरीरको तापक्रममा असन्तुलन हुन आउँछ।
मतलब शरीरको आफ्नो वास्तविक तापक्रमभन्दा पनि कम हुन जान्छ। जसले गर्दा आलश्य बनाउने, टाउको दुखाउने, दिउँसोको बेला सामान्यभन्दा बढि नै गर्मी भएको महशुस हुने, शरीरमा पानीको मात्रा घटेर जाने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। यसरी गर्मीको बेला साँझ नुहाउँदा शरीरको रक्तचापमा पनि असन्तुलन आउने डा. शेली बताउँछिन्।
त्यसैले यदि गर्मी मौसममा पनि राति नुहाउने बानी छ भने सुरुमा २ गिलास चिसो पानी पिएर अथवा रसिलो फलफूल खाएर शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा ल्याएर मात्रै नुहाउनु पर्दछ।
बढ्दो माघी महोत्सवको रौनक !
बच्चाको नामाकरण गर्दा नगर्नुहोस् ८ गल्ति, जसले जीवनभर पछुतो हुनेछ !